imvula Acid - kuba imvula yemvelo ne asidi, okuyinto izikhathi eziningana ephakeme kunokuvamile. Kuze kube manje, ososayensi baye ungakabi efakwe yonke imiphumela nemvula ene-asidi. Kuyini kucace ukuthi ukugeza ka amanzi emvula ukuze ngithuthukise isimo sakhe kwesikhumba, njengoba kwakunjalo eminyakeni engu-20 edlule, akukwazi sebekubeke. Lokhu kungenxa yokuthi nemvula ene-asidi, ingase ibe nemiphumela emibi futhi akuqinisekile, kokubili ebusweni futhi impilo yonke. umonakalo Irreparable kubo wonke emhlabeni ophilayo, emnothweni kanye nezolimo.
Acid Rain: Izimbangela Nemiphumela
Noma yimuphi KULETHA ukugqashuka phansi, naphezu ubumsulwa kwangaphandle empeleni zihlanganisa izinhlayiya ezincane ngothuli, zonke izinhlobo Amagciwane, impova kusuka emhlabeni wonke, ezinhlamvu fungal, kanye izinsimbi ezisindayo emkhathini kanye kwekhabhoni izimboni. Zonke lezi inclusions ekusakazeni liyithela imvula naphezu kwabakhileyo ikhanda eMhlabeni, futhi kunzima ukucabanga ukuthi kusho ukuthini lokho.
Wonke umuntu ejwayelene Iqiniso umthelela ongemuhle nemvula ene-asidi isimo sonke isimo esikuso. Ngokuhamba kwesikhathi emizimbeni amanzi ikhula lokuhlushwa Inkomba nosawoti of izinsimbi ezisindayo ezinobuthi ezingaba yingozi kakhulu, isib, phambili ne-cadmium. Zemvelo futhi odokotela, ngenxa yalesi sizathu, it is kakhulu belulekwa ukuba ukubhukuda nhlobo noma ukwenza kanjalo akuvamile, ukuze bazivikele emiphumeleni nemvula ene-asidi, njengoba endleleni umzimba osabela ngayo kungaba ezingalindelekile.
imvula Acid kuyinto nomthelela sina emzimbeni womuntu, uma aqukethe manganese, okungaba okuqukethwe omkhulu. Manganese clogs imigudu ezinzwa esibangela ukukhathala ezinzima, ukusebenza kungancipha, ukozela, ubuthakathaka, isiyezi, isicanucanu. Ayikho kuyingozi kancane aluminium, okuyinto, kancane kancane efaka eminyakeni eminingana, kungathikameza ukukhula izifo ezihlukahlukene zezinzwa.
imvula Acid singenzeka ngenxa ukushiswa zokubasa ezimbiwa phansi, emkhathini ukuwa oxides nitrogen nesibabule. Sulphur oxides, ngokuhlanganisa i amanzi emkhathini kokuba amaconsi ukwakha sulfuric acid, okuyinto, falling imvula, futhi kuyingozi umnotho nemvelo (zokudoba, ezamahlathi kanye nezolimo, kanye nabanye.). amahlathi European ezilimele cishe 38% of the indawo, kungenzeka ukuthi acidification inhlabathi yalezi zindawo enkulu kakade alimala ungalungiseki. imvula Acid lunomthelela omubi ezweni lakwa-Nyakatfo Melika, eYurophu nase-Asia, futhi muva nje uvele ulwazi mayelana umonakalo zomhlaba abahlala ezindaweni ulwandle.
I isici esimkhathaza kakhulu imiphumela ye-sulphur kwekhabhoni kuyinto ukungakwazi sinomthelela inkinga, ngisho nokulawula kwekhabhoni emsebenzini.
Inani umonakalo owenziwe imvelo, kunzima ukuhlola, njengoba kuncike yokwakheka inhlabathi kanye nesisekelo esiqinile sezindinganiso. Noma kunjalo, kukhona inguqulo ukuthi nenhlabathi ecashile siliceous, ungqimba ezondile umhlabathi namanzi esithambile nezindawo ezishiwo kwezulu uwela, sengozini ngokwezinga elikhulu. Lokhu kungenxa enganele solubility Stony amatshe kanye nokuntuleka e amanzi ane-alikhali izinto kungadambisa ushintsho asidi. Ngenxa yalokho, kukhona ukwehliswa okuphawulekayo inani izinhlanzi yabulala namachibi ezinhlanzi.
Kuleli zwe lanamuhla, umthelela iThrojani efaka isimeli seseva isibe embulungeni yonke, futhi kubalulekile ukubambisana kwamazwe omhlaba ukufunda le nkinga, futhi uma kunesidingo - ukwamukelwa of izinyathelo ezithile.
Ukuxazulula le nkinga ye ukungcoliswa komoya ngo-sulphur dioxide ukunciphisa ukusetshenziswa kwemithombo yamandla, ukwenza ngcono ukulawulwa of emkhathini noma search kanye nokuthuthukisa izindlela amandla kagesi.
Inombolo octane uphethiloli
Njengoba lisetshenziswe sodium oleate?
Ukuvakasha "Igolide Elimqoka Lika-Abkhazia": umzila, izindawo ezithakazelisayo kakhulu, isithombe
Indlela ifakazise kuye ukuthi ngiyamthanda? Okufanele ukwenze ukufakazela uthando lwakhe
I-Kaliningrad, i-Botanical Garden: amahora asebenzayo, isithombe, iwebhusayithi esemthethweni nokuthi ungafika kanjani
Buyelela utlole oda